नेपाल आज | शिक्षा र स्वास्थ्यमा झन्डै दुई खर्ब बजेट
शिक्षा र स्वास्थ्यमा झन्डै दुई खर्ब बजेट
मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले झन्डै दुई खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले ‘समाजवाद यात्रातर्फको प्रस्थानबिन्दु हुने’ भनेको छ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षामा एक खर्ब ३४ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने र स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाउनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारिएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, मदिरा, चुरोेट, सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
२० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बजेटमार्फत शिक्षामा गरिएको लगानी हेर्दा आफू धेरै आशावादी नभएको शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने जनाएको छ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइने भएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गराइनेछ । विकास सूचकांकमा पछि परेका सामुदायिक विद्यालयमा पाँच कक्षासम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ ।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य बजेट विनियोजन
बलात्कारी आशाराम बापुसँग स्वामी आनन्द अरुणको अदालतमै तुलना हुँदा...
मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित हुँदा श्रेष्ठलाई घाटा
एउटा गीत गाउन नमानेका जगजित सिंहले जब आलोकका १० गीत गाए
गाेली लागेर घाइते भएका विप्लव कार्यकर्ताको मृत्यु
बिहे हुनुभन्दा आठ दिन अघि युवकद्वारा आत्महत्या